Nandrolone Phenylpropionate (NPP) poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) is steroid anabolic iyo inoshandiswa pakuwedzera musimba uye simba uye kukurudzira kuwedzera kwemazi. iyo yakafanana zvikuru neyandrolone decanoate.
Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) Tsanangudzo
Nandrolone phenylpropionate (NPP) powder inogadzirwa anabolic-androgenic steroid (AAS) uye 1 (2) -dehydrogenated analogue ye testosterone. Nandrolone phenpropionate zvakare inonzi 3-phenylpropionate ester. Inobatanidzwa senhengo yevanabolic uye an androgen. Inobva kune nandrolone.Nandrolone phenylpropionate inowanikwa chete kune vanhu vakashandisa kana kutora ichi chirwere. Icho chiri C18 steroid ne androgenic uye anabolic zvinhu. Inowanzogadzirirwa kubva kune alkyl ethers ye-estradiol kuti ifanane ne testosterone asi pasi imwe kabhoni panzvimbo ye19. Ndiyo purogiramu III mishonga muUnited States Nandrolone inonzi anrogen receptor agonist. Iyo mishonga inosungirirwa kune yakagadziriswa inoshandiswa iyo inobvumira kuti iende mukati memukati uye kusunga zvakananga kune zvakananga zvinokonzera nucleotide ye chromosomal DNA. Nzvimbo dzekusunga dzinonzi hormone response elements (HREs), uye dzinoita basa rezvinyorwa zvevamwe mazamu, zvichiita kuti uyerogen zviitike.
Kemikari Name • NPP
muchiso Name Durabolin
Molecular Wsere 406.56
Kunyorera Point 85-87 ° C
Kubikira pfungwa 487.61 ° C (yakawandisa kuongororwa)
APane Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) poda yakashandiswa zvikurukuru mukurapa kenza yepamusoro yepabonde kuvakadzi uye sechirongwa chekugadzirisa kurapwa kwemaSenile kana postmenopausal osteoporosis muvakadzi.
Chii chakakosha Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8)?
Nandrolone Phenylpropionate i 19-nortestosterone (19-nor) anabolic androgenic steroid. I19-kana kusarudzwa kunoreva kuchinja kwemashoko e testosterone hormone mukuti carbon atom yakabviswa panzvimbo ye19th. Iyi shanduko ine sarudzo inoita kuti tipe Nandrolone, uye nekuwedzera pfupi phenylpropionate ester tine Nandrolone Phenylpropionate.
Pamusoro peSteroid, Nandrolone Phenylpropionate yakafanana neNandrolone Decanoate. Izvo zvose mafomu akabatwa nehomoni imwe inoshanda. Munyaya yeNPP shanduro shorter ester inopa kuputika kukuru kweNandrolone mushure mejojo, asiwo inotakura hafu yenguva shoma-hupenyu. Izvi zvinoreva kuti Nandrolone Phenylpropionate inowedzerwa kakawanda kupfuura iyo yakakura sterterpart kana mazinga eropa ari kuramba akasimba.
Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) mabasa
Nandrolone phenpropionate inowanika muvanhu vakashandisa kana kutora ichi chirwere. Icho chiri C18 steroid ne androgenic uye anabolic zvinhu. Inowanzogadzirirwa kubva ku-alkyl ethers ye-estradiol kuti ifanane ne testosterone asi pasi imwe kabhoni panzvimbo ye19. Ndiyo purogiramu III mishonga muUnited States Nandrolone inonzi anrogen receptor agonist. Iyo mishonga inosungirirwa kune yakagadziriswa inogadzirisa iyo inobvumira kupinda mukati memukati uye kusunga zvakananga kune zvakasiyana zvinokonzerwa nucleotide ye chromosomal DNA. Nzvimbo dzekusunga dzinonzi hormone response elements (HREs), uye dzinobata basa rezvinyorwa zvevamwe mazamu, zvichiita kuti uyerogen zvikanganiso.
Mune chirwere chechirongwa chechimiro chevarume Nandrolone Phenylpropionate doses kazhinji inowira mu 50-100mg kwevhiki. Kune vakadzi vanoshandiswa, kunyange zvisingawanzogadziriswa kana zvakatemwa zvinowanzova 50mg pavhiki. Munenge mishonga yose yezvoutano iyo Decanoate version yakatemwa.
Nokuti mutambi kana mutambo wemagetsi anogona kusiyana zvikuru. 100mg vhiki imwe neimwe ichapa ruzivo rwakakosha rwekurapa ne200mg kwevhiki iri rakajairika sezvo izvi zvicharatidza kuti zvakanyanya kuvandudzwa kupora. Mune maitiro mashoma ekushandurwa kwembiru 300-400mg nevhiki ichava iyo yakawanda dosing range, uye iyi ndiyo yakakwana yekuvaka kana kuchengetedza mishonga yemisumbu. Vamwe vachashandisa zvakawanda, asi izvi zvichawedzera ngozi yemigumisiro.
Pasinei nokuti chirwere chinoshandisa chirwere chakakwana chinoparadzaniswa kuva majekiseni matatu akaenzana kwevhiki. Yakarongwa kune rimwe zuva rimwe zuva kuti rive nemigumisiro yakaisvonaka. Mavhiki e8-12, nguva yakajairika yekushandiswa kwevatambi vakawanda. Izvo zvisiri zvemitambo dzevakadzi dzinoshandisa steroid kwevhiki ye 4-6 uye chirwere chinowanzopfuura kwete 50mg nevhiki kana virilization isingaiti.
Kuwedzera IGF-1 Production
Kuwedzera Nitrogen Kuchengetedzwa
Kuwedzera kweProtein Synthesis
Kuwedzerwa Red Red Cell Count
Kuwedzera Collagen Synthesis & Bone Mineral Content
NPP inoshandiswawo kuitira kubata chirwere chakasiyana-siyana. Varwere vane HIV nekenza vanogona kubatsirwa nokuidzivirira, sezvingaita vanorwara nekuneta uye zvirwere-kuparadza zvirwere. Uyewo, avo vane chirwere chekushaya ropa vanogona kubatsirwa. Mimwe mimwe mienzaniso yemamiriro ezvinhu anogona kutarisirwa neNandrolone Phenylpropioniate powder inosanganisira kenza yemazamu, anemia, pituitary dwarfism, zvinopisa zvakanyanya, zvipembenene, matambudziko ekuvandudza mupfungwa (muvana) uye osteoporosis.
Tenga Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8) kubva kuBuasas.com
1 Kudzokorora nokuti Raw Nandrolone Phenylpropionate (NPP) powder (62-90-8)
Chigadzirwa NANDROLONE PHENYLPROPIONATE (NPP) chinobatsira zvikuru.